Taorian’ny fanakatonana ny Apple Daily, namafa lahatsoratra sy nampiato famandrihana ilay media nomerika Stand News ao Hong Kong · Global Voices teny Malagasy
Taorian'ny fanakatonana ny Apple Daily, namafa lahatsoratra sy nampiato famandrihana ilay media nomerika Stand News ao Hong Kong
Lalanan'ny fiarovam-pirenena, mpanoratra iray hafa tao amin'ny Apple Daily voasambotra
MpanoratraHong Kong Free Press
Voadika ny 29 Jona 2021 5:10 GMT
Vakio amin'ny teny русский, English, Español, Italiano, English
Pikantsary avy amin'ny Stand News.
Ity lahatsoratra manaraka ity dia nosoratan'i Selina Cheng ary navoakan'ny Hong Kong Free Press tamin'ny 28 Jona 2021. Naverin'ny Global Voices navoaka teo ambanin'ny fifanarahana iray hifampizara votoaty.
Nilaza ilay famoahambaovao nomerika Stand News fa hanàla lahatsoratra fanehoankevitra sy tsanganana navoakany talohan'ny volana May ary hampiato ny fanekena fanomezana mba hampihenana ny mety ho kinanga hanjo azy araka ny lalàna momba ny filaminam-pirenena. Fanambaràna natao taorian'ireo tatitra fisiana fandrahonana tsy nitononana anarana nalefa ho an'ny sasantsasany tamin'ireo mpamoaka vaovao ao Hong Kong.
Ny 27 Jona, nilaza ny Stand News, izay ny mpamaky no mamatsy vola azy, fa mety hanaisotra ireo lahatsoratra rehetra navoakan'ireo mpandray anjara ao aminy sy ireo mpandalina tsy tapaka, ary ireo lahatsoratra fanehoankevitra navoaka talohan'ny May. Misy lahatsoratra ampolony maro nosoratana mpanao gazety sy mpandalina pôlitika ao an-tanàna ao amin'ilay bilaogy.
Tonga ity fivoaran-draharaha ity taorian'ny naharaisan'ny gazety Apple Daily, izay efa tsy hita intsony izao, sy ireo rantsana hafa mpanao gazety tsy miankina, ireo hafatra miafina miaty fandrahonana sy lisitra feno misy ny anaran'ireo mpiasa miasa amin'ny ampaham-potoana na tontolo andro ao aminy.
Ny 24 Jona no nitsahatra tsy nivoaka ny Apple Daily, mpomba ny demaokrasia, nijoro hatramin'ny 1995, rehefa nosamborina ny dimy tamin'ireo mpitantana mpanatanteraka ary ireo mpanoratra matoandahatsoratra tao aminy, nampangaina ho miray tsikombakomba amina hery vahiny mba hanohintohinana ny filaminam-pirenena. Nisy mpanoratra iray hafa indray nosamborina teny amin'ny seranam-piaramanidina tamin'ny 27 Jona.
Nogiazan'ireo manampahefana ihany koa ny vola 18 tapitrisa dolara HK (2,3 tapitrisa dolara amerikàna) tahiry avy amin'ny foiben'ilay gazety, tsy nahafahany nandoa ny karaman'ireo mpiasany.
Ny Stand News, media tsy miankina ety anaty tambajotra, natsangana tamin'ny 2014, dia mifantoka bebe kokoa amin'ireo vaovaom-pitsaràna sy ny pôlitika taorian'ireo hetsipanoherana tamin'ny 2019.
Mba hisorohana ny fahavoazana ara-bola bebe kokoa raha sanatria giazana ny kaontiny, nambaran'ilay media fa atsahatra aloha ny fanekena fanampiana vaovao sy ny vola fandrotsak'ireo malala-tànana mahazatra. Nolazain'ilay orinasa fa manana ny ho enti-manana hiantohana ny fanodinana azy mandritra ny 9-12 volana eo izy.
Enina tamin'ireo tale tao amin'ny orinasany, isan'ireny i Margaret Ng sy ilay olomalaza mpandàla ny demaokrasia, Denise Ho, no nametraka fialàna tsy ho ao anatin'ny orinasa, ka namela an'ilay lehiben'ny famoahan-dahatsoratra, Chung Pui-kuen sy ilay mpiara-manorina, Choi Tung-ho ho eo amin'ny fitantanana.
Natsahatr'ilay orinasa ihany koa ny fifanarahana asa ho an'ireo mpiasa izay niasa nandritra ny volana enina mahery tao amin'ny orinasa mba hanafoanana ny tamby fanome azy ireny, ary naveriny nampidirina niasa ny sasantsasany tamin'izy ireo, saingy fifanarahana vaovao, tamin'ny volana May.
Hafatra miaty fandrahonana
Nilaza ho naharay hafatra miaty fandrahonana ny Apple Daily sy ireo rantsana hafa mpanao gazety tsy miankina, hoy i Oiwan Lam, mpanao gazety tsy miankina mavitrika, no sady toniandahatsoratry ny Global Voices ao Azia Atsinanana, tao amin'ny pejiny Patreon. Hita ao anatin'ny hafatra iray ny lisitra fenon'ny anaran'ireo mpiasa sy tale rehetra ampiasain'ny orinasa, isan'izany ireo miasa ampaham-potoana. Hoy ny nosoratan'i Lam:
Raha toa ka mora tahaka izany ny mahita ny lisitr'ireo mpikambana anatin'ny filankevi-pitantanan'ny orinasa, miaiga avy amin'ny rejisitr'ireo orinasa, mba hahazoan'ilay olona ny lisitr'ireo mpiasa ao amin'ny orinasa dia tsy maintsy afaka miditra, na amin'ny sampandraharahan'ny hetra, na any amin'ny Mandatory Provident Fund izy.
Izaho mino fa nandray ny fepetra hifehezana ny kinanga hanoherana ireny fandrahonana ireny ny Stand News — mba hanakelezana ny mety ho fahavoazana tsy niriana ho an'ny tsirairay sy ny fahavoazana ara-bola raha sanatria mandray fepetra hanenjika azy ny pôlisy.
Ho setrin'ny fiovàna nisy ao amin'ny Stand News, ny Hong Kong Journalists Association (HKJA) dia nanao fanambaràna iray:
Ny hoe nisy media iray hafa indray nanao sivana ny asany mba hifanaraka amin'ny lalàna momba ny filaminam-pirenena dia azo itarafana fa ny indostrian'ny fampahalalam-baovao eto Hong Kong dia misedra toedraharaha vao mainka sarotsarotra kokoa hatrany. Manana zo hanana ny fahalalahan'ny asa fanaovana gazety sy ny fanehoana hevitra ny vahoakan'i Hong Kong araka ny Lalana Fototra. Manainga ny governemanta ny HKJA mba hanao hetsika ho fiarovana ireny zo ireny.